Knowledge - Sports myanamr
ဒီရာသီမှာ အသင်းသစ်တွေနဲ့ မတောက်ပနိုင်သေးတဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမား ၅ ယောက်
ဥရောပ ဘောလုံး လောက ရဲ့ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲတွေ စတင် ခဲ့တာ ရက်သတ္တပတ် အတော်ကြာခဲ့ ပါပြီ ။ နွေရာသီ အပြောင်း အရွှေ့ တုန်းက အသင်းသစ်တွေ ကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေ ရှာဖွေ ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒိ အထဲမှာ အသင်းသစ် …
ထူးထူးခြားခြား ဘောလုံးလောက . . . . . မွေးနေ့ ၂ ခု ရှိတဲ့ ရိုနယ်ဒို
ဘရာဇီး ဂန္ထဝင် ဘောလုံး သမားကြီး ရိုနယ်ဒို နာဇာရီယို ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ငယ်ဘ၀ ကို စိုးမိုးခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ မက်ဆီ နဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို တို့ မပေါ်လာခင် မှာ ဘောလုံး လောက ရဲ့ လူကြိုက် အများဆုံး ကစားသမား တဦး …
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုမှာ အဆင့် ၃ ရရင် ယူရိုပါလိဂ်ကို မဆင်းရတော့ဘူးလား ?
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာတော့ ပရိသတ် အချို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သိချင်တဲ့ မေးခွန်း တခု ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါ ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဆင့် မှာ အဆင့် ၃ ရတဲ့ အသင်းဟာ ယူရိုပါလိဂ် ကို မဆင်းရတော့ ဘူးလား …